मध्यपहाडको यात्रा चिवाभञ्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म - Baikalpikkhabar
मध्यपहाडको यात्रा चिवाभञ्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म
सिधुवाहुँदै गाडी अघि बढ्दै थियो । मेरो मनभने ०६१ सालका ती दिनहरू सम्झिएर एकतमासले एकोहोरियो । तत्कालीन माओवादी पार्टी्भित्र प्रचण्ड र बाबुरामको बीचमा भयानक वैचारिक अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको थियो । यस अन्तरसङ्घर्षमा म बाबुरामले अघि सार्नुभएको लाइनतिर उभिएको थिएँ ।
मैले रुसी कम्युनिस्ट पार्टी र स्तालिनलाई सम्झिएँ त्यसबेला । पार्टी्भित्रको अन्तरसङ्घर्षको कारण स्तालिनले १३८ जनाको केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये ९७ जनाको हत्या गराएकाथिए ।
त्यही बिरालोले कोपरेको ढुङ्गा (लिम्बू भाषामा म्याङ्को अर्थ बिरालो र लुङ्को अर्थ कोपरेको, चिथोरेको) को नामबाट म्याङ्लुङ नाम रहन गएको रहेछ । बजार प्रवेश गर्ने्बित्तिकै दुरुस्तै बिरालोको तर बाघको जत्रै स्तम्भ रहेछ । एकबर्ष अघिसम्म यो स्तम्भ थिएन । स्तम्भनजिकै एउटा पसलमा चिया पियौं ।
कत्रो डर रछ गाँठे प्रचण्डलाई बाबुरामको । चुनाव चिन्है पो दिएन त !” बाले नयाँ शक्ति चुनावमा हार्नुको आफ्नो बुझाई पनि सुनाए । “चुनाव चिन्ह नदिने खबर सुनेपछि म त बेसुराजस्तो भएछु । रात र दिन पनि उस्तै लाग्ने, आफ्नो र पराई पनि नचिन्ने । अहिले सम्झदा पनि कम्ता रिस उठ्दैन ? त्यस्लाई‘. ।” बाले कटटट दाह्रा किटे ।
(लेखक गंगा श्रेष्ठको मध्यपहाड यात्रा पुस्तक भोलि फागुन १५ गते युनियन हाउस अनामनगरमा विमोचन हुँदैछ ।)
पुस्तकको नाम स् मध्यपहाड यात्रा
विमोचन मिति २०७६ फाल्गुण १५, युनियन हाउस, अनामनगर । समय १२ः३० बजे ।
अर्थडबली बाट साभार गरिएको
बुधबार, १४ फागुन, २०७६, दिउँसोको ०२:२९ बजे